Ukupaka amagalaji Ukuqasha eWorthing, eWest Sussex
Uhlu Lwezakhiwo: Amagaraji nezindawo zokupaka izimoto Ukupaka amagalaji I-West Sussex Worthing
I-Worthing () yidolobha elikhulu lolwandle eNgilandi, futhi yisifunda esinezimo ezivulekile eWest Sussex. Itholakala ezansi kweSouth Downs, 10 miles (16 km) entshonalanga kweBrighton, kanye nama-18 miles (29 km) empumalanga yedolobha lesifunda laseChichester. Ngokwesilinganiso senani labantu be-104,600 kanye nendawo engamakhilomitha-skwele angama-12.5 (i-32.37 km2) indawo etholakala endaweni yesibili ngobukhulu ingxubevange ye-Brighton / Worthing / Littlehampton, okuyenza ibe yingxenye yedolobha lase15th elinabantu abaningi e-United Kingdom. Kusukela izingxenye ze-2010 ezisenyakatho yesibaya, kufaka phakathi iWorthing Downland Estate, zakha ingxenye yeSouth Downs National Park. Ngo-Ephreli 2019, i-Art Deco Worthing Pier yabizwa indawo enhle kakhulu eBrithani. Indawo ezungeze i-Worthing ihlale okungenani iminyaka eyi-6,000 futhi iqukethe izimayini zaseBrone Age ezakhiwe kakhulu, ezinye zezimayini zokuqala zaseYurophu. Ilele ngaphakathi kwesifunda, i-Iron Age hill castle yeCissbury Ring ingenye yezindawo ezinkulu kunazo zonke eBrithani. I-Worthing isho ukuthi "(indawo ka) Worth / Worō's yabantu", igama lesiNgisi elidala elithi Worth / Worō (igama lisho "umuntu onesibindi, onobuhle"), kanye no- "abantu baka "(ancishiselwe ukungena ku-in igama lesimanje). Eminyakeni eminingi i-Worthing yayiwukudla okuncane kokudotshwa kwama-mackerel kuze kube sekupheleni kwekhulu le-18th yathuthuka yaba indawo enhle yolwandle yaseGeorgia futhi yaheha abantu abaziwayo nabacebile bangaleso sikhathi. Eminyakeni eyikhulu ye-19th ne-20th le ndawo yayingesinye sezindawo zokugcina izingadi zaseBrithani. Imakethe kaModern Worthing inemboni enkulu yezinsizakalo, ikakhulukazi ezinsizakalweni zezezimali. Inezinkundla ezintathu zemidlalo yaseshashalazini enye yamabhayisikobho amadala aseBrithani iDome cinema. Ababhali u-Oscar Wilde noHarold Pinter babehlala futhi basebenza edolobheni.